प्रतिपक्षको बैठक- विविधा - कान्तिपुर समाचार
‘प्रतिपक्ष भनेको कुम्भकर्ण हो । छ महीना सुत्यो, एक दिन उठेर आँ गर्‍यो, रावणले पेटभरि आहारा हालिदिन्छ, ढ्याउअ डकार्‍यो, अनि फेरि सुत्यो ।’
जेष्ठ २४, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
कैयौं हप्ताको निस्तब्धता पछि एक अपराहृन पार्टी मुख्यालयको टेलिफोन घन्कियो । नजीकै सुतिरहेको कार्यालय सहायक झस्केर उठ्यो र हतारहतार फोन उठायो । नमस्कारको सट्टा भन्ने गरिएको ‘जय नेपाल’ भनिसक्न नपाउँदै नेताजीको आदेश पायो, ‘भोलि मीटिङ हुन्छ, तयारी गर्नू ।’
पार्टी ठूलो थियो । सबैभन्दा पुरानो । पुरानो कोट जस्तै । शानदार इतिहास भएको तर वर्तमानमा साइज नमिलेको । ‘बेडरूम’ बाट ‘स्टोररूम’ मा पुगेको । नेताहरू पनि त्यही कोट जस्ता थिए । मुख्यालयले तिनको मुख देख्न औंसीपुर्ने कुर्नुपर्थ्यो । त्यतिन्जेल माकुरा, मूसा र साङ्लाले राजकाज चलाउँथे । नेताजीको फोन पछि कार्यालय सहायकले कुचीकार, जमदार, चौकीदार सबैलाई बोलाएर आदेश जारी गर्‍यो, ‘भोलि बैठक छ, बिहानै आएर अफिस सफा गर्ने ।’
नेताहरू आइपुग्दा दिन ओरालो लाग्दैथियो । बिहानको खानपीन अर्थात् ‘लन्च’ सकेर एक निद्रा सुतेपछि एक कप चिया खाएर ढीला नगरी आउँदा त्यति समय त भइहाल्थ्यो । सामान्य भलाकुसारी पछि बैठक शुरू भयो । शुरूमै सभापतिले भने, ‘यो निर्णय गर्न बोलाइएको बैठक हो । आज हामीले ऐतिँहासिक निर्णय गर्नुपर्छ । अब निर्णय गरौं ।’
‘छलफलै भएको छैन, के निर्णय गर्ने ?’ गर्नुपर्ने निर्णयबारे थाहा पाइसकेका र त्यही निर्णय गर्न तयार भएर आएका नेता नम्बर दुईले प्रश्न गरे । उनको उद्देश्य प्रश्न गर्नु नभएर आफूले सभापतिलाई टक्कर दिएको देखाउनु थियो ।
‘शुरूमै छलफलतिर लाग्दा आज निर्णय गर्न भ्याइँदैन । त्यसैले पहिला निर्णय गरिहालौं । छलफल त्यसपछि गरौंला’ सभापतिले सह–महामन्त्रीलाई अह्राए, ‘निर्णय लेख्नोस् त !’
‘के लेख्ने दाइ ?’
‘सत्तारूढ दलले निर्णय गरिसक्यो । हामीले पनि त्यही निर्णय गर्ने हो । त्यही लेख्नोस् न !’
‘मैले बुझिनँ’ तिलचामले दारीवाल युवा नेता कस्सिए, ‘हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल । सत्तापक्षले निर्णय गरिसकेको कुरा हाम्रो निर्णय कसरी हुन्छ ? यसलाई निर्णय भनिन्छ कि समर्थन ?’
‘यो यस्तै हो भाइ’ दार्शनिक नेताले सम्झाउन खोजे, ‘उहिलेउहिले हामी निर्णय गर्थ्यौं, अरू पार्टी विरोध अथवा समर्थन गर्दै हाम्रा पछि लतारिन्थे । आज समय फेरिएको छ । निर्णय अरूले गर्छन्, हामी तिनको पछि लतारिन्छौं । विरोध गरे पनि समर्थन गरे पनि त्यो क्रिया नभएर प्रतिक्रिया मात्र हो । तर त्यसलाई निर्णय भनिदिंदा अलिक गहकिलो सुनिन्छ क्या ! कुरा बुझ न ।’
‘के बुझ्नु ? प्रतिपक्षको काम सरकारको समर्थन मात्र गर्ने हो ? हामीले आन्दोलन गर्न पाउनुपर्दैन ?’ दारीवाल रन्किए, ‘बिहान हामी आन्दोलन घोषणा गर्छौं, साँझ हाम्रा नेता महाराजको दर्शनभेटमा जान्छन् र आन्दोलन तुहाइदिन्छन् ।’
‘हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछौं’ सभापतिले बचाउ गरे, ‘देशको जिम्मा महाराजले लिएका छन्, विरोधको जिम्मा पनि उनकै पार्टीले लिएको छ । जे गर्छन्, गरून् । हामीले बेकारमा किन टाउको दुखाउने ?’
‘ठीक भन्नुभो । रचनात्मक प्रतिपक्ष भनेको कुम्भकर्णको अवतार हो । छ महीना सुत्यो, एक दिन उठेर आँ गर्‍यो, रावणले पेटभरि आहारा हालिदिन्छ, ढ्याउअ डकार्‍यो, अनि फेरि सुत्यो । होइन त ?’ नेता नम्बर तीनले व्यंग्य गरे ।
बैठकमा हाँसो छायो । सभापति झर्किए, ‘नकराऊ यार । त्यो त्रेतायुगको कथा हो । कलियुगको रावणलाई त छ महीनामा एकचोटि भेट्नु पनि लंका जिते जस्तो हुन्छ । कति कुरा मिलाउनुपर्छ, तिमीहरूलाई के थाहा ? पार्टी चलाइदिएकै छु, चूप लागेर बस न ।’
‘यसरी हुँदैन नि दाइ, तपाईं पो भाउजूले भनेपछि गएर कुरा मिलाउनुहुन्छ र ढुक्क छ । हाम्रो त बिजोक छ । आम्दानीको बाटै सुकिसक्यो’ एक नेतापुत्रले गनगन गरे ।
फूलमाला सहित फोटो टाँगिने नेताहरूका आधा दर्जन जति सन्तान बैठकमा उपस्थित थिए, जसले आफ्ना बाबुको नाममा गैसस चलाउँथे र सरकारबाट वर्षेनि मोटो अनुदान कुम्ल्याउँथे । सभापतिले तिनलाई एकमुस्ट सम्बोधन गरे, ‘तिमीहरूका आआफ्नै पसल छन्, झन् कसैले त सुपरमार्केट नै चलाएका छौ । अरू कति चाहियो ?’
‘उहाँहरूको मात्र कुरा होइन, हामीलाई पनि संकट छ’ लहरै बसेका आठजना पूर्वमन्त्रीमध्ये एकले मुख फोरे, ‘अब त व्यापारी–उद्योगपतिले हाम्रो फोन पनि उठाउन छाडे । न कतैबाट चन्दा आउँछ, न कमिशन । कसैले पत्याउँदैन । अरू त अरू, पत्रकारले धरी फोन गर्दैनन् । यस्तो भएपछि आन्दोलन नगरी हुन्छ ?’
भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्न खोज्दा राजीनामा दिन बाध्य पारिएका पूर्वमन्त्री अर्को लहरमा थिए । उनले झम्टिए, ‘अरू कोही नभएर तपाईंहरूका लागि पार्टीले आन्दोलन गरिदिनुपर्ने ? अलिकति त लाज मान्नोस् ।’
‘मेरो एउटा सुझाव छ’ धार्मिक क्षेत्र हेर्ने वयस्क नेताले आन्दोलनको विकल्प सुझाए, ‘हामी एउटा भव्य महायज्ञ गरौं । मान्छेहरू मेरो सम्पर्कमा छन् । इन्डियाबाट पनि बाबाहरू आउनुहुन्छ । सारा व्यवस्थापन मेरो जिम्मामा हुन्छ । पार्टीले एक पैसा खर्च गर्नुपर्दैन । महायज्ञ पछि सम्पूर्ण ग्रहदशा समाप्त हुन्छन् । शत्रुको विनाश हुन्छ र पार्टीको भाग्य चम्किन्छ ।’
‘कुरो त ठीकै हो । घरबाट पनि मलाई यस्तै सुझाव आएको थियो । तर कोरोना चम्केको वेला महायज्ञ गर्दा मान्छेले के भन्लान् ?’ सभापतिले नरम भाषामा अस्वीकार गरे ।
‘आन्दोलन पनि नगर्ने, महायज्ञ पनि नगर्ने । केही नगर्ने भए पार्टीको नाम नै झखापा राखिदिऊँ न त’ ६८ वर्षीय युवा नेताले छेड हाने, ‘झखापा अर्थात् झर्ला र खाउँला पार्टी ।’
बैठकमा हाँसोको विस्फोट भयो । सभापति चाहिं गम्भीर थिए, ‘आफूले झार्न सकिंदैन क्यारे । झरेपछि नै खाने त हो नि । बाहिर पो भन्न हुँदैन !’
‘यो पनि एउटा नीति हो । खास गरी अहिलेको अवस्थामा हाम्रा लागि यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति हो’ सभापति निकट बौद्धिक नेता ‘झर्ला र खाउँला’ को सिद्धान्तीकरण गर्न अघि सरे, ‘यसको सूत्र हो— लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ, अर्जुनदृष्टि राखेर बस्नुपर्छ र धैर्य गर्नुपर्छ । भाग्यले साथ दिए जे पनि हुन्छ । एउटा नीतिकथा सुन्नोस्...
‘एकपल्ट एउटा सपेराले सर्प समातेछ र काठको सानो डिब्बामा हालेर बन्द गरिदिएछ । हलचल गर्न नसकिने र सास फेर्न पनि गाह्रो हुने त्यो डिब्बामा भोकै–प्यासै एक हप्ता बिताएपछि सर्प अधमरो भएछ । चारैतिरबाट निराश भएर उसले बाँच्ने आशा समेत गुमाएछ । त्यही वेला एउटा मूसो खानेकुरा खोज्दै डिब्बामा प्वाल पारेर भित्र पसेछ । अकस्मात् आफ्नो मुखमा आइपुगेको मूसालाई सर्पले झटपट आहारा बनाएछ र उसैले पारेको प्वालबाट सुलुलुलु बाहिर निस्केर आफ्नो दुलोतिर लागेछ ।
‘यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा हो— झार्छु र खान्छु भनेर चुरीफुरी गर्नेको हालत मूसाको जस्तो हुन्छ । भाग्यमा भए आहारा तपाईंको मुखमै आइपुग्छ । आफैं झरे पनि, अर्काले झारिदिए पनि खाने तपाईंले नै हो ।’
‘हाम्रा लागि कसले झारिदेला र ?’ नम्बर दुईले सुस्केरा हाले ।
‘हेर्दै जानोस्, के हुन्छ !’
‘अहिल्यै भन्देको छु, अब त मैले खान पाउनुपर्छ’ मुख मिठ्याउँदै नम्बर दुईले सभापतिको अनुहारमा हेरे ।
‘खूब खाउला...’ सभापतिले जिस्क्याए, ‘मलाई ज्योतिषीले छपल्ट खान पाउँछस् भनेको छ । चारपल्ट खाइसकें, अझै दुईपल्ट बाँकी छ ।’
‘कहिले झर्ने, कहिले खाने...’ उनले ओठ लेप्र्याए ।
‘के थाहा, यसपालिको दशैं खर्च मेरै हातबाट पाउने हौ कि ?’ सभापतिले जिस्क्याउन छोडेनन् ।
‘खर्चले मात्र कहाँ हुन्छ ? दशैंमा घर जान एउटा राम्रो गाडी पनि चाहिन्छ,’ नम्बर दुईले मौका छोपे । उनलाई लाग्यो, आज सभापतिलाई दुईचोटि टक्कर दिएँ ।
‘ल अब बैठक टुंग्याऊँ । साँझको तलतल लाग्ने वेला भो’ सभापतिले आदेश दिए, ‘आजको निर्णय सुनाउनोस् त ।’
के विषयमा के निर्णय गरियो भन्ने थाहा नपाएका सदस्यहरूले आफ्नो निर्णय सुन्न कान ठाडा पारे । सह–महामन्त्रीले निर्णय सुनाए : ‘हाम्रो पार्टी आफ्नो देशको नक्शा आफैं बनाउने सत्तापक्षको निर्णयप्रति सहमत हुने निर्णय गर्दछ ।’
पछाडि बसेकी महिला नेत्रीले हाँसो रोक्न सकिनन् । खितखिताउँदै भनिन्, ‘देशको नक्शा त पाँच कक्षामा पढ्ने मेरी छोरीले पनि आफैं बनाइरहेकी छ नि । यस्तो कुरा पनि यत्रो बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ ?’
सभापति बाहिर निस्किसकेका थिए । प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७७ ०९:५७
ब्लग : देश खोज्दै फर्कनेहरुको नाममा...
जेष्ठ २४, २०७७ गंगा बीसी
काठमाडौँ — माफ गर्नुहोला । मैले लेखेर खासै केही फरक पर्ने छैन । स्वदेश फर्कदाफर्कदैँ भाइरसको ‘हट–बेड’जस्ता क्वारेन्टाइनमा काखका नानी गुमाएका बाआमाहरु माफ गर्नुहोला । मैले तपाईका नाममा दुई शब्द खर्च गरेर राज्यले सुन्ने छैन । यो केवल पीडा पोख्ने एउटा माध्याममात्र हुनेछ ।
ज्यान गुमाउनेहरुलाई श्रद्धाञ्जलीसिवाय केही हुने छैन । दुई शव्द कोरेर खास अर्थमा आफन्तलाई सानो समवेदनामात्र हुनेछ । तपाईंहरुले भोगेका रोग र भोकको पीडा कल्पना गर्न सकिदैन । सीमादेखि क्वारेन्टाइनसम्म भोगेका कष्टका कुरागरी साध्य छैन ।
कोरोनाले महामारीको रुप लिइसकेपछि तपाईहरुले देश सम्झनु भयो । राज्यले तपाईंलाई किन सम्झन्थ्यो ? तपाईलाई के गन्ति गर्थ्यौ ? देशमै भएका नागरिकलाई शासकले चिनेनन्, सयौं मजदुर सयौ किलोमिटर हिँडेर घर फर्कंदा यस्तै भएको थियो ।
राज्यल परदेशी नेपालीहरुलाई चिन्ने ‘कष्ट’ किन गर्थ्यो ? रहरले होइन, बाध्यताले परदेशी हुनु भएका तपाईंहरुलाई राज्यले (अ)नागरिक ठान्नु स्वभाविक हो । यदि राज्यले चिनेको भए देशको सीमामै आएका नागरिकलाई ढोकै थुनेर कुनचाहिँ शासकले राख्न सक्थे ? आफ्ना नागरिक चिनेको भए आमाका काखमै पुगेको बच्चालाई छेकेर कोही रमाउन सक्दैनथ्यो ।
शासकहरुले देशमै काम गरेर खाने वातावरण बनाएको भए अर्काको देशमा अपमान सहेर बस्नु पर्ने थिएन । कोरोना भाइसरले विश्व लकडाउन भएको बेला परदेशी दाजुभाइले आफ्नो देश सम्झनु, आफ्नी आमालाई खोज्नु के दोष थियो ? पसिना विदेशमा बगाए के भयो ? देश चलाउन रेमिट्यान्स पठाएकै हो । संकटमा देश आउन खोज्दा रोक्ने अधिकार शासकलाई कसले दियो ? आफ्नो देश फर्कन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । स्वदेश फर्केर आफ्नो घरमा सुरक्षित भएपछि अवश्य तपाईँहरुले नेताहरुलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ ।
केही समय अघिसम्म स्वदेश फर्कन हजारौ दाजुभाइ, दिदीबहिनी सिमा आएर धैर्यपूर्वक पर्खिरहे । लकडाउन खोल्ने प्रतीक्षामा भारतको क्वारेन्टाइनमा कष्ट काटेर बसे । केही दाजुभाइहरु उत्तराखण्डबाट ज्यानको बाजी लगाएर सुसाउँदो महाकाली तरेर आफ्नो घर फर्किए । महाकाली पार गरेर आफ्नो मातृभूमि टेक्दा पक्कै गर्व लागेको थियो होला तर शासकका रक्षकले तपाईलाई अपराधीजस्तै समातेर लगे । के आफ्नो मातृभूमिमा फर्कनु दोष थियो ?
क्वारेन्टाइन बस्दाबस्दै बा, आमा गुमाउँदासमेत शासकको मन पग्लिएन । कामक्रिया गर्न घरमा आउन पनि बिन्ती हाल्नुपर्ने अवस्था आयो । आफ्नो आमाको काखमा आउन पनि दया माग्नु पर्‍यो । देश कसको हो ? माटो कसको हो ? स्वदेश फर्केका दाजुभाइ, दिदीबहिनीले उत्तर खोज्नु पर्ने छ ।
भारतबाट घर फर्कने क्रममा क्वारेन्टाइनमा उपचार नपाएर १० जनाले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । बाँकेमा एकजना युवाको क्वारेन्टाइनमा बसेकै बेला जीवनजल समेत खान नपाएर मृृत्यु भयो । भारतबाट फर्कदै गर्दा बैतडीमा मुटु सम्बन्धी औषधि खान नपाएर युवतीको मृत्यु भयो । बझाङमा एक बालकको पनि क्वारेन्टाइनमा उपचार नपाएर ज्यान गयो । त्यस्तै डडेल्धुरामा एक बालकसहित २ जनाको पनि उचित उपचार नपाएर मृत्यु भएको छ । भारतबाट घर फर्कदै गर्दा गुल्मीका एक युवकको कपिलवस्तुमा र सुर्खेतका २, दैलेखका १ र जुम्लाका १ जनाको पनि क्वारेन्टाइनमा उपचार नपाएर मृत्यु भएको छ ।
यी सबैको भारतबाट स्वदेश फर्कदै गर्दा क्वारेन्टाइनमा बस्दाबस्दै मृत्यु भएको हो । भारतमा कोरोना संक्रमण व्यापक भएको बेला मृतकहरु ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्केका थिए । तर, घर नपुग्दै बाटोमै ज्यान गयो ।
सीमामा केही दिन अलपत्र परेका उनीहरुलाई भोकैप्यासै क्वारेन्टाइनमा राखियो । सीमाबाट ल्याएर क्वारेन्टाइनको कष्टपूर्ण बसाइ थेग्न नसकी कमजोर ज्यान ढल्यो । परदेशमा मरेको भए सायदै गन्ति हुने थिएन, आफ्नो देशको माटो टेकेपछि उनीहरुको गन्ति भयो । आफ्नो माटो टेकेपछि ज्यान बच्नु पर्ने थियो । तर ज्यान गयो । हुन त उनीहरुको मृत्युले राज्य संचालकलाई छोएन । हरेक वर्ष रोग र भोकले मर्नेहरुको संख्यामा थपिएको एउटा संख्याका रुपमा उनीहरुले त्यसलाई लिए । उनीहरुको मृत्यु प्वाखजस्तो हलुङ्गो ठानियो ।
खासगरी भारतबाट फर्कनेहरुमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढी देखिएको छ । बाध्यताले विदेशिएकाहरुको यो भयानक दुःख हो । स्वदेश फर्किएकाहरु जो संक्रमित भए, अब उनीहरुलाई गाउँमा बर्जित गरिएको छ । उनीहरुको परिवारलाई दूरदूर गरिएको छ । मानवले मानवलाई गर्ने व्यबहारमा फरकपन आएको छ । भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ, सबै सतर्क हुनुपर्छ, जोगिनु पर्छ । तर, त्यसका नाममा यहाँ मनावताविरोधी गतिविधि भइरहेका छन् ।
हवाइजहाजबाट आउने र लड्दैपड्दै आउनेप्रति राज्यको व्यबहार पनि विभेदकारी छ । चीन र अरु देशबाट आउनेहरुको क्वारेन्टाइनको स्तर अर्कै छ । खासगरी भारतबाट आउनेहरुलाई न्युनत सुविधा पनि छैन । क्वारेन्टाइनमा जीवनजल र न्युनतम औषधि नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आँखाले मानवीय व्यबहार पनि देखाउँदैन । सरकारले त मानवीय व्यबहार देखाएन, देखाएन, स्वयं गाउँलेले समेत ‘अछुत’ व्यवहार देखाए । यतिबेला उनीहरुले महसुस गरेको हुनुपर्छ, जो होचो, उसको मुखमा घोचो ।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन बाध्यता हो । राज्यको लकडाउन घोषणालाई जनताले राम्ररी साथ दिएकै छन् । लकडाउन कति समय भयो ? त्यसको खास अर्थ हुन्छ । लकडाउनको अवधिभर सरकारले केको काम गर्‍यो ? त्यसको झन् ठूलो महत्व हुन्छ । खासगरी भारतमा भएका नेपालीलाई बेलैमा स्वदेश ल्याउन वातावरण बनाएको भए, अहिलेको अवस्था सृजना हुने थिएन । भारतमा व्यापक संक्रमण भएपछि नेपालीहरु देशको सीमामै आएर अड्के । त्यहाँ उनीहरु झन् संक्रमणमा परे । आगोसरी एकबाट अर्कोमा संक्रमण फैलियो । अहिले उनीहरु सरकारको हेपाई र भाइरसको संक्रमणमा परेका छन् ।
भनिदैछ, उनीहरु स्वदेश फर्कनु गल्ती थियो । स्वदेश नर्फकिएर जाने ठाउँ कहाँ थियो ? ढिलोसम्म स्वदेश आउने ढोका कसले बन्द गर्‍यो ? बेलैमा स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई ल्याएको भए हालसम्म व्यवस्थापन भइसक्ने थियो । आफैं ढोका थुनेर ढिला किन आइस् ? भनेजस्तै स्वदेश फर्केका दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई व्यवबहार गरिँदैछ ।
स्वदेश फर्केकालाई माया र सहयोग गर्ने बेला झन् दुःख दिएको दर्जनौं उदाहरण छन् । बाध्यताले काम खोज्दै विदेश गएका नेपालीहरुले त्यहाँ अपमान सहेर भए पनि कमाइ गरे, स्वदेश पठाए । उनीहरुको पसिना विदेशमा बगे पनि त्यसको कमाइले नेपालको ढुकुटी बलियो बनायो । अहिले उनीहरुलाई घरसम्म सुरक्षित पुर्‍याउन तीनै तहका सरकारलाई दाँतबाट पसिना आएको छ ।
लकडाउन अवधिभर तीनै तहका सरकारले हजारौ क्वारेन्टाइन बनाएको हल्लाखल्ला गरेका थिए । ती क्वारेन्टाइन अहिले संक्रमण फैलाउने र मृत्युका कारण बनिरहेका छन् । केही नगण्य क्वारेन्टाइनले मात्र सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका होलान् । क्वारेन्टाइन आफैं सरकारका अनुहारजस्ता भएका छन् । सरकार बुझ्न क्वारेन्टाइन गए भयो । क्वारेन्टाइन बनाउने नाममा राज्य कोषबाट कति रकम खर्च भयो ? त्ससको लेखाजोखा पछि होला, अहिलेचाहिँ मानवीय सेवा भए ठूलो काम ।
उनीहरु देश खोज्दै आएका हुन् । पहिलैदेखि शासकहरुले चिथोर्दै आए पनि यो देश सबैको हो । परदेशबाट फर्कनेहरुको पनि देश हो । उनीहरु शरण लिन आएका होइनन्, आफ्नो देश भन्दै फर्केका हुन् । उनीहरुले भोगेको दुःख, सहेको अपमान र देखेको देशको हालत देख्दा आफ्नो देश भनेर पत्याउन गाह्रो मानिरहेका छन् । त्यो जमानामा भूपि शेरचनले देशको हालत देखेर भनेका थिए, भोकमा डुबेका चोकहरु देख्दा गलत लाग्छ देशकोको इतिहास ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७७ ०९:५३